एप्पल म्याकबुक प्रो रेटिना १ repair "को" Staingate "मर्मत गर्दछ। म म्याकबाट हुँ
एप्पल केहि 13 ″ म्याकबुक प्रो रेटिना मा प्रदर्शन समस्या को अन्त हेरचाह गर्छ
मिगुएल एन्जिल जुन्कोस | | एप्पल, मैकबुक प्रो, हाम्रो बारेमा, म्याक कम्प्युटरहरू
एप्पलको समर्थन फोरमले १ specific ″ म्याकबुक प्रो रेटिना स्क्रिनमा विशेष समस्याको बारेमा गुनासोहरू भर्न सुरु गरेको केही समय भयो। २०१ models को अन्त्यमा बिकिएका मोडेलहरूएप्पलले आफ्नो वेबसाइटमा दिएका सफाई निर्देशनहरू पत्र पछ्याउँदै, स्क्रीनहरूले तिनीहरूमा केही पनि नगरीकन लगाउने संकेतहरू देखाउन थाल्यो।
प्रयोगकर्ताहरूले टिप्पणी गरे कसरी सतहमा नरम र सुख्खा लुगा सफा गरेपछि (अधिकतम नम), जब उनीहरूको स्क्रीनहरू केही समय पछि तिनीहरूले एन्टिरेफ्लेक्शन कभरेज गुमाए, स्क्रिनको सम्पूर्ण सतहमा केही धेरै कुरूप मार्कहरू छोडिदै, मानौं यदि कुनै प्रकारको घर्षण उत्पादन प्रयोग गरिएको थियो। j
यस शनिबार एप्पलले यस समस्याको समाधान गर्न गुणस्तरीय कार्यक्रम सुरू गरेको छ विरोधी परावर्तनशील कोटिंग्स प्रभावित म्याकबुक प्रो रेटिना को।
जहाँसम्म तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ, एप्पलले नि: शुल्क स्क्रिनहरू प्रतिस्थापन गर्दछ तर सार्वजनिक रूपमा रिलीज गर्दैन, यस कार्यक्रममा नामांकनको म्यादको साथ। मार्च १ 16, २०१ from बाट एक वर्ष वा मूल खरीद को पहिलो तीन वर्ष भित्र। जे भए पनि, यो स्पष्ट छैन कि एप्पलले कस्ता सर्तहरूमा स्क्रिनहरू मर्मत गर्न स्वीकार गर्दछ वा मर्मत र प्रतिस्थापन कार्यक्रम कस्तो हुनेछ।
यसबाहेक, केही प्रयोगकर्ताहरूले एप्पलबाट ईमेल पनि प्राप्त गरेका थिए जुन तिनीहरूले इन्टरनेटमा बिभिन्न सूचना मिडियाबाट प्राप्त गर्न सकेको जानकारीको पुष्टि गर्दछ।
प्रभावित म्याकबुकहरूको संख्या ट्रान्सपिर गरिएको छैन तर यदि हामी सन्दर्भको रूपमा लिन्छौं भने वेबसाइटको Staingate.org र फेसबुक समुदाय यस कारणका लागि सिर्जना गरिएको हो, एप्पल फोरममा प्रयोगकर्ताहरू बाहेक हामी यो भन्न सक्दछौं करीव 5.000,००० प्रयोगकर्ताहरू हुनेछन्.
अन्तिम कारखाना दोष मर्मत अभियान जसमा एप्पलले अर्को प्रतिस्थापन कार्यक्रम खोल्छ, समस्याको कारण थियो अप्टिकल स्थिरीकरण केहि आईफोन Plus प्लसको क्यामेरामा।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक कम्प्युटरहरू » मैकबुक प्रो » एप्पल केहि 13 ″ म्याकबुक प्रो रेटिना मा प्रदर्शन समस्या को अन्त हेरचाह गर्छ
जोकर 46 भन्यो
मसँग मेरो १-इन्चको म्याकबुक प्रो रेटिनासँग समस्या छ र मैले यो महसुस गरेको छु कि मैले यो पढेको छु, मैले एप्पललाई बोलाएको छु र उनीहरू भन्छन कि यस घटनाको लागि कुनै वारेन्टी विस्तार छैन, म कसरी यो घटनाको लागि साइन अप गर्नु पर्छ? म गर्छु? यदि म एप्पलको प्राविधिक सेवामा जान्छु भने उनीहरूले मलाई ती घटनाहरू देखाउनको लागि मात्र शुल्क लिने छन्… ..
Jocker46 लाई जवाफ दिनुहोस्
लुइस एपाब्लाजा भन्यो
तिनीहरूले मलाई जवाफ दिए, वास्तवमा म प्रतिस्थापनको प्रक्रियामा छु र नोभेम्बर २०१ 2014 को अन्त्यमा मैले यसलाई खरीद गरें
लुइस Apablaza लाई जवाफ दिनुहोस्
म्याकबुक प्रो १ buying किनेको तीन महिना पछि ″ मैले स्क्रीन बदल्नको लागि यसलाई लिनुपर्‍यो किनभने ती प्रतिबिम्बहरू देखा पर्‍यो। एक हप्ता बिना ल्यापटप बिना, तिनीहरूले बिना मेरो स्क्रीन परिवर्तन गरे। अब, months महिना पछि मसँग फेरि समस्याहरू छन् ...। ईमानदारीपूर्वक ... म मेरो हातमा एक मध्यम उत्पादन गर्न सबै भन्दा राम्रो मूल्य मा सबै भन्दा राम्रो चयन गरेको छैन।
JMG7 लाई जवाफ दिनुहोस्
म यी समस्याहरूसँग छु र मैले भनिन्छ ...। मलाई यो लिन भनिएको छ, चिन्ता नलिनुहोस्, यो वारेन्टीमा छ। मैले यो डेढ बर्ष पहिले किनेको हो।
विकिएन्ट गलियाना भन्यो
यो मलाई २०१ 13 को अगस्तमा खरिद गरिएको म्याकबुक प्रो रेटिना १ with को साथ पनि हुन गयो। हिजो हिजो तिनीहरूले पर्दा परिवर्तन गरे कुनै समस्या बिना (तार्किक कुरा, जाऔं)
भिकेंट गलियानालाई जवाफ दिनुहोस्
म तिनीहरूलाई रिसाउँछु ताकि उनीहरूले मलाई दाबी कसरी गर्ने भनेर बताउनुहोस् (मैले डिसेम्बर २०१ in मा चिलीमा मेरो म्याकबुक खरीद गरें)।
म उही समस्याको साथमा छु, कृपया कसलाई टिप्पणी गर्नुपर्दछ मैले मेरो समस्यालाई संकेत गर्नु पर्छ।
मलाई पनि त्यस्तै समस्या छ। स्पटहरू स्क्रिनको कोणमा देखा पर्दछन्। म्याकबुक प्रो २०१ ret को मध्य रेटिना। मैले हेरचाह गरेकोमा यो कुल छ। स्पेन मा किनेको। म हाल अर्जेन्टिनामा बस्छु जहाँ आधिकारिक एप्पल घर छैन। कुनै समाधान? यस समस्याको साथ अर्जेन्टिनाबाट कोही छ? निराश, अझ बढि जब हामी एक उच्च-कम्प्युटरको बारेमा कुरा गर्छौं र त्यो मेरो मामलामा छनौट गरियो किनभने यसमा रेटिना स्क्रिन रहेको छ।
त्यो समस्या मलाई पनि भयो। मैले दयालुपूर्वक दावी गरें, (झगडा नगरी) र आज तिनीहरूले यसलाई परिवर्तन गरे। पोष्टका लागि धन्यबाद
हामीलाई पढ्नका लागि धन्यबाद र तपाईंको नयाँ स्क्रीनमा बधाई छ।
म कहाँ कल गर्न वा यो समस्या समाधान गर्न को लागी जान्छ?
नमस्कार, मैले टेक्निकल सपोर्ट च्याट मार्फत मेरो समस्या वर्णन गरें र म्याकबुकको सिरियल नम्बर जस्ता केही जानकारी सोध्नु भए पछि उनीहरूले यो पुष्टि गरे कि म प्रभावित छु र तिनीहरूले वारेन्टी warrant बर्षमा विस्तार गरेर स्क्रिन मर्मत गर्नेछन्। मैले २ बर्षको months महिना बितिसकेको थियो)।
अब मलाई एप्पल स्टोरमा जानु पर्छ ...
मसँग म्याकबुक प्रो छ (रेटिना, १-इन्च, प्रारम्भिक २०१)) र मलाई लाग्छ कि मेरो स्क्रिनमा पनि त्यस्तै समस्या आएको छ। मैले समर्थनलाई सम्पर्क गर्न कोसिस गरेको छु तर उनीहरूले मलाई सहयोग अनुरोध गर्न € २ pay तिर्नु पर्छ भनेर बताउँछन्।
म जान्न चाहन्छु कि मेरो म्याक मोडेलमा नि: शुल्क स्क्रिन मर्मत छ। यदि त्यसो हो भने, मैले यो कसरी गर्नु पर्छ र यदि होईन भने, स्क्रिनलाई प्रतिस्थापन गर्न कत्ति खर्च हुन्छ।
Jeyson javier भन्यो
मँ आज एक एप्पल स्टोर गए कि तिनीहरूले स्क्रीन मेरो लागी के भनेर मलाई सिफारिश गर्न सक्छ कि हेर्न को लागी र तिनीहरूले मलाई परिवर्तन प्रभावी बनाउन १ to ″ म्याकबुक प्रो रेटिना को खरीद देखि years बर्ष को अवधि थियो कि मलाई भन्यो, तिनीहरूले भने मसँग कि अर्को हप्ता म Tuesday्गलबार लिने छ, तिनीहरूले यो प्राप्त गरे मलाई अर्को लागतमा अर्को नयाँ म्याकबुक दिन। यो सत्य हो कि होइन हेरौं, मंगलबार मँ तिमीलाई बताउँछु
Jeyson Javier लाई जवाफ दिनुहोस्
म होन्डुरसमा बस्छु र मैले २०१ Mac को यस वर्ष रेटिना स्क्रिनको साथ यो म्याकबुक प्रो खरीद गरें। म्याक केवल months महिना पुरानो हो र पहिले नै स्थिर भईरहेको छ। मलाई थाहा छैन म के गरु
नयाँ कार्यहरू चलचित्र, नयाँ आईम्याक रेटिना, आईवर्क अपडेट र अधिक। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ